Mety ve ny manasa ny bisikiletako an-tendrombohitra? - Hitaingina Bisikileta
Tena > Hitaingina Bisikileta > Manasa bisikileta an-tendrombohitra - vahaolana amin'ny
Manasa bisikileta an-tendrombohitra - vahaolana amin'ny
Mety ve ny manasa ny bisikiletako an-tendrombohitra?
Sasao tsara nybisikiletahiantohana ny savony na ny vokatra tsy tavela satria mety hiteraka olana izany. Ity dingana fanasan-tongotrao itybisikiletatsara kokoa raha tsy misy mpanasa fanerena satria mora tokoa ny manala menaka manandanja avy amin'ny bearings, headset, pivots, bracket ambany, hubs ary kodiarana jockey.
Eny ary, ka andao hijery ny fanasana amin'ny bisikileta tena feno. Zavatra ataoko aorian'ny fandehanana maloto tokoa na alohan'ny fikojakojana bisikileta mety. Hanomboka hiala ny kodiarana sy ny zavatra toy izany aho.
Atombohy amin'ny fiparitahana azy io, miezaha fotsiny hamoaka ny ratsy indrindra amin'ny fotaka. Afaka mampiasa fanasana jet ianao, nefa tadidio fa ny fanasana jet dia hampidina ny menaka rehetra ao amin'ny bearings anao. Ka raha manao izany ianao dia tandremo ny toerana hanapoahanao azy.
Manomboka amin'ny fihodinana ny kodiarana aho, manapoaka ny loto rehetra amin'ny kodiarana, ary avy eo miasa avy any ambony ka hatrany ambany amin'ny bisikileta, tsy manadino ny mandeha ambanin'ny seza sy eo ambanin'ny fefy. Raha misy bisikileta mihantona feno miaraka amina boaty dia azoko ny fantsom-panafody mba hahafahako mamafy ao aoriany, ary toy izany koa ny fork. Manana ireto fitsaharana kely ireto ao ambadiky ny clamp telo ianao, sasao ireo ary miakatra ao ihany koa amin'ny steerer, ka izao lasa ny ratsy indrindra ary mbola mando foana, hiditra ao aho miaraka amin'ny mpanadio bisikileta sy borosy iray hanadiovana ny tena zavatra maditra Manala zavatra.
Tsara hatrany ny mampiasa ny mpanadio bisikileta mety. Namboarina mba tsy hanimba ny valin-drakotrao na zavatra hafa, na ho mafy loatra amin'ny hosodoko. Mampiasà mpanadio bisikileta raha afaka.
Arotsaho kely fotsiny izany zavatra izany, manodinkodina ny kodiarana ihany koa, ary midira ao ambadiky ny kasety. Horodiko ny bisikileta ao anatin'ny iray segondra ary hanamboarana tanteraka ilay rojo sy kasety miaraka aminy aho. Ary rehefa eo izy dia esory ary esory izay entana mbola miraikitra ao.
Mandehana manodidina ny rojo vyo, manodidina ny kasetanao, ahodina eo io. Ary mendrika ny hamela izany amin'ny bisikileta mandritra ny minitra vitsy hampiasana ny majika. Noho izany, mpanadio efa mandeha minitra vitsy izao.
Nandehandeha borosy aho mba hamindrana ny sasany amin'ireo zavatra maditra ireo, ankehitriny dia te-hamoaka azy rehetra aho. Manomboka eo an-tampon'ny bisikileta sy eo ambanin'ny seza, avy eo handeha hiasa aho. Ankehitriny rehefa voahodina tanteraka ilay bisikileta dia tena hanadio ilay rojo aho.
Raha manana talantalana bisikileta ianao dia fotoana mety izao hametrahana azy eo. Samy hafa ny fahafaha-manao amin'izany. Afaka nampiasa borosy kely henjana ianao.
Tena tsara ireto sponjy ireto, spaonjy marimarina tokoa misy mpanasa lamba eo afovoany hametrahako ilay rojo. Na ny safidy tsara indrindra dia iray amin'ireo mpanadio rojo kely izay hamenoanao azy amin'ny detergent ary ahodinanao ny rojo. Tsy dia maninona izany.
Io angamba no fomba mora indrindra anaovana azy. Io angamba no tena matavy elbow. Fa manantena aho fa tokony handeha amin'ny fomba mitovy.
Hampiasa ny sasany amin'ireo mpanadio rojo aho. Tsara satria matanjaka tokoa, ka hanala zavatra miraikitra amin'ny rojom-bolanao. Tsy voatery hampiasa an'io ianao fa afaka mampiasa ilay mpanadio bisikileta mahazatra fotsiny ary mandoko azy tsara fotsiny. ary ampitao tsara amin'ny borosy.
Ka na eo aza ny degreaser manao ny asany dia hampiasa ny borosiko aho handehanana manodidina ny cartridge ary avy eo hikosoka tsara ilay rojo ny mech anao koa. Eny ary, izao no fotoana hisintonana ny fantsom-pifandraisana. Madio ny rojo ka izao no fotoana hanalana ny kodia ary handeha ao aorinan'ny rojo vy sy ny fijanonan'ny seza ary hiditra amin'ireo tendrony sy crannies rehetra ireo.
Miverina indray aho, mampiasa detergent sy borosy. Ny tsorakazo amin'ity lafiny ity dia mora azo aleha amin'ny borosy. Mety ho hitanao amin'ny bisikiletanao fa tery izy ireo.
Azonao atao ny mitady borosy kely mahafinaritra handehanana any mba hamoahana zavatra tena mahatsiravina izay ao. Ka rehefa mivoaka ny bisikileta dia mora kokoa izao ny miditra ary manome ny cassette ho madio tsara. Averiko indray fa hampiasa an'io degreaser sy borosy io aho ary hamoaka ireo zavatra miraikitra ao.
Noho izany, miaraka amin'ny bisikileta madio sy miverina miaraka indray, miasa amin'ny rojo aho izao. Raha te hamela ny rojo maina sy hihosotra mialoha ianao, dia mety hanana harafesina. Ka mampiasa lamba maloto aloha aho ary mihazakazaka fotsiny ilay rojo ary manandrana mamoaka ny ankamaroan'ny rano ao aminy.
Tena madio sy maina izao ny rojo. Alefaso amin'ny rantsan-tanako izany, tsy misy zavatra mainty mivoaka mihitsy, ka tsara izany. Izao no fotoana hamerenanao indray azy ireo.
Avereno alefa indray ilay rojo. Ny ampahany lehibe indrindra amin'izany dia ny mitandrina tsara raha mahazo zavatra amin'ny kapila aoriana ianao. Hahatonga tabataba mahatsiravina izany ary tsy handeha araka ny tokony ho izy.
Koa mitandrema bebe kokoa amin'ny fampiasana tsifotra, ary raha manao izany ianao dia ho ampiasaiko eto. Mampiasa tavoahangy kely mamintina aho mba hahafahako mametraka azy eo akaikin'ny kodiarana aoriana. Ary avelako hianjera ao anaty rojo eo an-tampony izy, eo anoloana ny kodiarana mpanohana.
Vitsy kely fotsiny, mandalo ao. Raha atorakao eto izy, dia hihazakazaka maloto eo ambonin'ilay bisikileta aho ary hodiovina ny fihoaram-pefy rehetra. Eny ary, misy vitsivitsy fanampiny fanampiny raha te-hanampy ny famaranana amin'ny bisikiletanao ianao.
Azonao atao ny mampiasa an'io sifotra silika io mba hanomezana famirapiratan'ny bisikileta. Avereno, tandremo tsara sao mahazo an'izany amin'ny kapilao na pad frein. Ka mirona mampiasa lamba malaso aho mba hampitsaharana ny spray fotsiny ary omena kely ny bisikileta.
ab fanatanjahan-tena miaraka amin'ny dumbbells
Hanome famirapiratany tena tsara io. 'BS spray' no iantsoako azy. Asao izany.
Hampiasa saborotra fanosotra fanantona kely aho. Menaka manify be fotsiny io. Noho izany, apetaho eo ambonin'ilay tohotra ilay izy ary omeo fehezam-baravarana tsara ilay tombo-kase tohana mba hahazoana antoka fa tsy misy mifikitra aminy.
Ka izao dia hodioviko kely ny tombo-kase. Mampiasa fatorana zip aho amin'izany, mba hikorisa eo anelanelan'ny tongotry ny fork sy ny tombo-kase fotsiny. Mazava ho azy, aza mampiasa zavatra mafy toy ny visy, fa hanimba azy io.
Mampiasà fehin-zip ary malefaka ihany, afatory, ary asio lube ho ao anatin'ireny tombo-kase ireny. Eny ary, mitandrina tsara aho raha hanaparitaka kely an'io lava-bato io eo amin'ilay fijoroana ary ho faty izy io, ary avy eo dia miasa ilay fatotra zipa manodidina io tombo-kase io mba hahafahan'ny menaka mitete ary tafiditra ao anaty menaka hifanaraka amin'ny tombo-kase Ankehitriny miala eo amin'ny toeran'ny bisikileta, raiso ny frein eo aloha ary tsindrio fotsiny ny fork. Ho hitanao fa manala ny vovoka avy amin'ireo tombo-kase ireo fotsiny izy, avy eo mamafa azy, ary angamba mamerina an'io indray mandeha na indroa mandra-pahadio azy.
Ka tsy manana an'izany fahalotoana sy vovoka izany ianao eo amin'ny paosinao fork. Ny tombo-kase dia tsara sy madio ary nohosorana. Eny ary, andao handeha.
20 na 30 minitra fotsiny no mba nitondrako ahy. Ny bisikileta tena madio sy vonona ny hitondra. Fotoana tena tsara koa hijerena amin'ny bisikileta ity bisikileta ity, hijerena ny simba ary koa hahafantatra hoe rahoviana no mila amboarina ny zavatra.
Manitatra ihany koa ny androm-piainan'ny singa misy anao, indrindra ny rojonao, raha tsara sy madio foana izy io. Lahatsoratra bebe kokoa avy amin'ny GMBN no hita eto ho an'i Marc Beaumont izay mampiseho aminao ny fomba fitazonana ny headset anao. Mendrika izany aorian'ny fanadiovana tanteraka ny bisikiletanao.
Ary koa ho an'ireo kojakoja bisikileta an-tendrombohitra 10 voalohany, kitiho eto ary ampahafantaro anay ny hevitrao. Raha hitanao fa mahasoa ity lahatsoratra ity, toy ny etsy ambany, ary raha te-hisoratra anarana amin'ny GMBN ianao dia kitiho aho.
Tokony hanasa ny bisikiletanao avy any an-tendrombohitra ve ianao isaky ny mandeha?
Ianao dia tokonyhomanadio ny bisikiletanao isaky ny avyVITSYmitainginaary azo antokarehefamisymitainginarahovianaianareotratranyorana. Raha mbolatsy izany ianaomampiasa milina fanasan-damba indostrialyianareotsy hanaoAzamisy simba amin'nynybearings, frame na zavatra hafa (bisikiletatena vita tsara ireo andro ireo).21 Mey 2015
Satria tsy afaka manasa ny hambom-ponao sy ny hafalianao ianao, mamporisika anao izahay tsy hanaraka ny ankamaroan'ireo fomba fanao ireo. Tsy maintsy nasehoko anao ny fomba tsy hianaranao amin'ny fomba sarotra. Ho an'ny fialambolinao ihany io. - Ralehilahy, jereo, mbola fotaka ny bisikiletako.
Farafaharatsiny maina daholo izany, mora mipoitra tampoka. Inona no ratsy indrindra mety hitranga. - Inona no ataonao, Blake? Aza esorina amin'ny spaonjy mihitsy ny fotaka maina amin'ny bisikiletanao, ataovy foana ny mando rehefa manadio ny bisikiletanao, indrindra rehefa manana bisikileta manjelanjelatra tsara ianao.
Raha mamafa ny bisikileta maina amin'ny bisikiletanao ianao ary tonga amin'ny masoandro rehefa maina, dia hokarasaina fotsiny ary ho mahatsiravina, aza sasao ny bisikiletanao! maina.- Wow lalana inona.- Oh zahao ny morontsiraka- Oh ny morontsiraka! Whoa yeah jereo ny fotaka rehetra, fasika ve izany sa ahoana? (mikiakiaka) - Mavesatra izany, ny tiako holazaina dia bisikileta GMBN mahazatra) Fialamboly mahafinaritra tokoa. - Na dia fotaka kely aza- Eny- Tsy andriko ny hiverina ao anatin'io van mafana io.- Eny, tsy ianao - I Hatsipiko ao fotsiny izany. - Tsia, tsy ataonao ao anaty l. - Fa nahoana no tsy? - Fantatrao ve ny fahadiovako? Tiako hadio, tsy ianao, ianao toa - Eny, manana detergent ve ianao amin'izay? - Ie, manana zavatra vitsivitsy ao aoriana izay azontsika ampiasaina aho.
Avelao hiala haingana eto aho. Manana kifafa aho eto.- Marina.- Jereo, ataovy izao.- Oh, tsara izany.- Mety te hanatsara ny ao ambadiky ny fiara ianao, fantatrao. - Ilay borosy maditra, eny azonao ampiasaina amin'ny kodiaranao ity hanesorana ireo fotaka matevina, saingy hiteraka harefo maro be manerana ny bisikiletanao izany.
Azafady, aza mampiasa na inona na inona amin'ny bisikiletanao, miandrasa mandra-podianao.- Rehefa nanadio ny bisikiletany i Blake teo aloha, dia nanapa-kevitra ny hamela azy io ho maina izay tsy mety amiko. Izany no antony tiako hamakiana Moni ary hametrahana azy.
Bisikileta, mando ny bisikiletanao, ary avy eo maka borosy borosy ianao dia afaka mahita izany. Jereo izany, Moni sy borosy no fomba tsara indrindra hanadiovana. Wow jereo izany. - Tsia, tsia, inona ny afobe? Aiza no ahafahanao mamaky Moni, manipy kafe na manana tavoahangy feno? ny electrolytes ao anaty vala-tavoahanginao amin'ny famafazana azy manerana ny bisikiletanao, eny manala ny fotaka izy, fa kosa hamela ny bisikiletanao ao anaty korontana, mahatsiravina sy miraikitra.
Miezaha hisoroka izany amin'ny sarany rehetra, miandrasa mandra-podianao mba hanasao azy tsara - Hey Sam, manasa haingana ny bisikileta alohan'ny hametrahana azy ao anaty fiara vaventy isika? - Eny, tena hanao an'izany isika. (Manelingelina ny fientanentanana) - Izay ihany, mandeha ihany ny fanasana jet. - Ny fanasana jet no tsara indrindra ho azy. (mozika quirky) - Azo antoka, i Jason dia ho nanaporofo fa ny fanasana jet dia tsy ratsy araka ny eritreretinao, fa tena te-handray ny risika ve ianao? Mampiasa ny jet indraindray aho fa tsy manasa tsy tapaka, indrindra raha manatona ireo toby ireo ianao.
Ary rehefa manadio ny bisikiletanao ianao, dia mampivadika azy io dia zavatra ratsy. Hahatonga ny loto rehetra hiangona amin'ireo teboka ifandraisana ireo. Fanampin'izay, tsy mahita ireo teboka manan-danja rehetra tokony hijanonana ho madio ianao - Awe, tsara dia tsara izany, - Whoa, inona no ataonao? Tsy apetrakao izany amin'ny fotaka rehetra ao. - Aiza no tokony hanasako azy? - Tsia, mandehana sasao - Oh eny, fantatro izany - any ho any - Fantatro hoe aiza no hanaovana azy.
Hataoko anaty rano ity - Eny, ny ranomasina. (mozika malefaka sy faly) - Blake, tsia, tsia. Fa manandrana maka fanahy anao toy ny mandroboka ny bisikiletanao any anaty ranomasina, manaova soa ianao ary manadio fotsy amin'ny vidiny rehetra, ity dia fomba haingana hanodinkodinana ireo singa misy anao ary hamotika ny loko vita amin'ny loko. (Mozika faly) - Oh. (Hehy) - Whoa Blake, zahao ity genika goavambe ity.
Manasa ny bisikiletanay ve ianao? Maimbo ny bisikileta. - Eny, lehilahy, andao hanao azy.- Ho tsara dia tsara.- Ahoana no ataontsika, (Miparitaka rano) Oh eny.- Atsipazo anaty dobo, farihy na rano, maka fanahy toa azy, andramo ialana.
Te-hadio ny bisikiletanao ianao, aza mampiasa ilay dobo tranainy manjavozavo, tsy hitandrina ny bisikiletanao ho madio sy maimbo izany .- Tsara lavitra izany.- Eny, tsara izany.- Ankehitriny azontsika apetraka ao anaty fiaranao izany , madio.- Eny, andao handeha amin'ny toerana hafa - farafaharatsiny tsy mila manasa azy isika rehefa miverina any an-trano - Misaotra anao nijery, ity lahatsoratra ity dia natao ho fialamboly fotsiny.
Ity lahatsoratra tsara tarehy ity dia nampifaly anao. Raha te hahita atiny lehibe misimisy kokoa ianao, aza hadino ny misoratra anarana amin'ny globe. Raha te hahita atiny mahafinaritra kokoa ianao dia ataovy Teknisiana miaraka amin'i Dotty i Jambe, kitiho eo fotsiny.
Omeo ankihiben-tanana toy ny itiavanao an'ity karazana atiny ity dia ho hitanay manaraka ianao.
Ahoana no fanadiovanao bisikileta an-tendrombohitra aorian'ny diaingenanao?
Araho ireto torohevitra ireto dia hahazo ianaonyasa vita haingana nefa tsy manimbanybisikileta.
Mitadiava toeranasasao madioizany.
Mitadiava borosy vitsivitsy ary kobanina.
Diovy nykasety sy singa hafa.
Mety ve ny manasa bisikileta an-tendrombohitra?
nympanasa tsindrydia afaka manampy amin'ny fanaovana asa maivana amin'ny fitazonana nybisikileta an-tendrombohitratsy misy fotaka mandritra ny ririnina. Aorian'ny fitsangatsanganana an-tsokosoko dia ilaina ny maka antoka fa esorinao ny volonao alohan'ny hiorenany satria rehefa maina dia sarotra ny vaky noho ny diamondra.15 mart 2021
Ny Jetwash dia fomba mahatalanjona sy haingana hanadio ireo zavatra izay misy ny bisikiletanao. Raha manasa azy tsara ianao dia ho hitantsika rehefa vonona hahita olona milaza ianao fa tsy manasa ny bisikiletanao dia hilaza aminao fa ny fiaramanidina haingana avy amin'ny fantsona avo lenta dia hanimba tanteraka ny fitondranao. ny rano dia tsindriana amin'ny tombo-kase misy tombo-kase ary ho any amin'ireo fitondra-tena, mety hisintona fasika sy loto aza miaraka aminy, izay, raha marina izany, dia hanimba ny bearings rehetra amin'ny bisikiletanao, ny kodiaranao, ny freewheel anao, ny kodiarana aoriana bearings, ny kodiarana eo anoloana, ny valiny fononteny valiny Ary toy izany koa ny bearings headset sy ny paosin'ny pedal mety ho fahadisoana lafo vidy kokoa, saingy toa tsy mieritreritra misy mahalala mekanika matihanina ve aho, manadio jet ianao isan'andro, avy eo izy ireo ovaova matetika kokoa ny ampahany ary amin'ny maha-mpamily baolina kitra fantatro azy Mendrika ny takolaky ny fanasana jet kely aho, dia ny maha samy hafa azy eo amin'ny fahazoana hazakazaka iray sy ny fijoroana eo an-tsisin'ny fametahana bisikileta roa vaky dia mila mamantatra isika raha ilay jet washi hanimba ny bisikiletanao ny ng, fa ianao dia hamela ahy raha somary kivy aho rehefa mijery an'ity mba hahitanao raha afaka mamaky azy io isika, mazava ho azy fa nataon'ny Tom Sturdy, tompony, raha mampiditra malaza sy Crank efa zatra tsara azy io ary jereo hoe mandra-pahoviana ny fanasana ny jet nefa efa tonga kilometatra vitsivitsy izy, fa izaho kosa namerina ara-bakiteny ireo tavy niaraka tamin'ny tavy vaovao avy eo aorian'ny fanasana jet haingana dia hofongorako indray, jereo fidiran'ny rano ary jereo raha mbola eo amin'ny toerany ny tavy ananantsika, miankina amin'ny valiny azontsika atao ny manangana azy indray ary mbola manasa zavatra, mandra-pahoviana no hanapoahana ny fonosantsika farany ambany? Tsy ho faly be ny segondra Lazao anay hivoaka, fa manana hamandoana avy any ivelany aho mila mandondona ny tombo-kase ivelany eny tsy misy na inona na inona ao anatiny voahosotra tanteraka ary tsy misy dian-drano amin'izao fotoana izao, dimy segondra ny famoahana ny noza tafavoaka velona amin'ny ambaratonga voalohany tanteraka Refill vita roapolo segondra izao rehefa tonga eo isika tena niditra izao tonga oh misy somary mando kokoa amin'ity indray mitoraka ity mbola tsy misy soritry ny menaka maina izay noza tena matotra izay, nisy 25 segondra teo dia iray minitra avy teo dia tena tonga aho tamin'ity indray mitoraka ity dia te-hanadio azy iray minitra ahodina kely mando ary hosasana mandritra ny 25 segondra ilay zavatra inona no heverinao fa matavy maina na tsio-drivotra oh ny androko eny eny mbola matavy tsy misy rano dia hahazo tombo-kase tombo-kase aho tsy misy mpamadika ara-bakiteny noho ny zavatra hafa rehetra ao dia andao horaisina hatramin'ny 11 na roa minitra roa minitra J et Fanasana tsara fa azonao izany ka mieritreritra aho fa nahita teboka teo amin'ny crank mampifandray ny rano hatrany anaty bra cket, ka handena betsaka araka izay tratra aho raha misy manao izany amin'ny bisikiletany hanadio azy ary hanadio izay minitra tsara dia tsy fantatro ny fonosana ambany, fa lena kosa aho rehefa rano niditra an-tsokosoko tamin'ity indray mitoraka ity nandritra ny roa, telo minitra ary 25 segondra ary nahazo rano tao amin'ilay tokana famehezana voalohany izahay. Andao hojerentsika hoe ahoana ny fiorenantsika amin'ny tamati, izay tsy dia ratsy loatra, saika tsy izany? efa voasasa ny diloilo fa manomboka mahazo kely 3 minitra 25 segondra isika ka inona no dikan'izany rehetra izany avelako ianao hanatsoaka hevitra anao satria fantatro fa ho an'ny sasany aminareo izay velona sy ao faritra tena maina, fa raha ny tena marina ny hevitra handoana ny bisikiletanao dia vahiny tanteraka aminao ary noho izany ny fiheverana dia mety ho nampatahotra anay tamin'ny toetrandro somary mafana, na dia toa tsy dia ratsy loatra ary ho ahy manokana dia tsy ' Tena manova zavatra aho satria faly foana tamin'ny hevitra hoe manasa bisikileta tena maloto indraindray ary manandrana misoroka tadin-javatra mora tohina, na dia heveriko fa manome fahatokisan-tena bebe kokoa noho ny tena ataoko aza izany. tsy ratsy na dia bracket ambany fotsiny aza io ary raha ny marina dia somary saro-pady ny headset anao ary tsy manana ah amin'ny kodiarana fampiofanana anao aho, antenaina fa manana zavatra izy ireo? dia raha iray amin'ireo olona mieritreritra tsy afaka manasa ny bisikiletanao ianao dia mety hahatonga anao hisaintsaina, mazava fa tsy hoe mianjera eo imasontsika fotsiny izany, aza mieritreritra tsara kokoa, dia hiditra an-tsehatra eo amin'ny sehatry ny fanehoan-kevitra etsy ambany dia tokony hosasana madio ny bisikiletanao alohan'ny handehananao any, azafady, misoratra anarana amin'ny GCMits tsindrio fotsiny izao eran'izao tontolo izao, ary avy eo vonona izy ary raha mila atiny bebe kokoa ianao dia hamafa ny votoatiny mazava tsara ao, afaka manadio bisikileta maloto ianao raha tsy misy Jetwash sy ambany toy ny mekanika matihanina dia manadio bisikileta amin'ny Jetwash
Impiry ianao no tokony hanasa bisikileta an-tendrombohitra?
Impiry tokonyahosasao madionybisikileta an-tendrombohitra? Mety indrindra,tokony hataonaohainganaMADIOary averina milomano isaky ny mandeha mafy roa na roa. Lalina kokoasasao madioilaina rahaianareomitaingina orana na fotaka.29 Jul. Feb 2020
Impiry ianao no tokony hanasa ny bisikiletanao an-tendrombohitra?
Ahoanamatetika aho no tokony hanasa ny bisikiletako an-tendrombohitra? Mety indrindra,tokony hataonao aTSARA HOMADIOary averina milomano isaky ny mandeha mafy roa na roa.nylalindalina kokoasasao madioilaina rahaianareomitaingina orana na fotaka.29 Jul. Feb 2020
Mety ve ny mampiasa WD40 amin'ny rojo bisikileta?
Afaka mampiasa WD-40 ve ahohamelombelona nyrojo bisikileta? Tsia. Tsy tokony hanao izany mihitsy ianaomampiasa WD40toy nyROJOlubricant nanombokaWD-40dia TSY tena lubricant satria voalohanyAmpiasaodia toy ny solvent na harafesina harafesina.24 mart 2020
Mety ve ny manasa ny bisikilanao amin'ny rano?
Maloto indrindrabisikiletany singa dia azo diovina amin'ny famafana azy ireo tsaranymando na lamba maina.Manasa ny bisikiletanaoamin'nynyny fantson-tsindry avo lenta dia mety hiteraka fahasimbana amin'ireo rafitra mitondra fihenam-bidy manerana ny tanyny bisikiletanao. Ka, rahovianamanasaamin'nyrano, ataovy tsara.
Azonao atao ve ny mampidina ny bisikiletanao eny an-tendrombohitra?
HO AN'NYbisikileta an-tendrombohitra,ianareotokony hanadiony bisikiletanaoaorian'ny fitsangatsanganana feno fotaka na isaky ny roa herinandro miaraka amin'ny fampiasana tsy tapaka amin'ny toetr'andro maina. Ka,afaka ve ianaoAmpiasaofantsanaamin'nyny bisikiletanao? ENY! Na izany aza, miaraka amin'ny metybisikiletateknika fanasana, fampiasanafantsanaSYnysiny misy savony misy ranonyfomba tsara indrindranymahazonysteed sparkley ary madio!
Inona no azoko hosasana amin'ny bisikiletako?
Fenoy rano mafana sy paosin-detergent ampy ny sininao mba hanamboarana lobolobo tsara, izay hanamorana ny fanadiovana. Manombokamanasafahazoana nybisikiletalena amin'ny rano mandriaka avy any ambony miaraka amin'ny fantsom-pohy na amin'ny fandrobohana ny spaonjy ary apetaho eo amboninybisikiletamando azy manontolo. Na, azonao atao ny manondraka rano savony mafana avy amin'ny siny.
Inona no fomba tsara indrindra hanasana bisikileta an-tendrombohitra?
Ny fomba tsara indrindra hanalana ny maloto amin'ny fomba mahomby, mora ary miaraka amin'ny valiny tsara indrindra. Fotaka. Na dia mety ho tsara aza ny mihodinkodina rehefa mivoaka mitaingina ianao, dia fanaintainana tanteraka ny manadio rehefa mody.
Impiry aho no tokony hanadio ny bisikiletako an-tendrombohitra?
Ny fanadiovana azy matetika loatra dia manimba bebe kokoa noho ny tsara. Ny fikosehana azy amin'ny borosy borosy mafy isan-kerinandro dia fomba azo antoka azo antoka hampihenana ny androm-piainan'ny bisikiletanao. Raha maloto tokoa ny bisikiletanao dia rehefa mila fandroana izy. Mitadiava toerana tsara hanasana ny bisikiletanao. Ampifanaraho amin'ny rindrina izany, apetraho amin'ny ilany bisikileta na apetraho eo amin'ny toeran'ny bisikileta.
Azonao atao ve ny manasa bisikileta tsy misy fantsom-pifandraisana?
*** DISCLAIMER: Raha mitaingina bisikileta ianao, amin'ny ankapobeny dia afaka mandalo fa tsy mampiasa fantsana. Atsipazo ny tsifotra ary mizotra mahitsy ho an'ny degreaser. Mampiasà degreaser hafainganam-pandeha izay tsy mila fanasana rano. Ary mampiasa lamba malemy sy madio mba hamafana ny endriny sy hametahana poleta miaro.